एजेन्सी / महिलाहरुले आफुलाई फिट राख्नको लागि अनेक मेहनत गर्छन। महिलाहरु आफू सुन्दर हुनका लागि ब्युटिपार्लर जान्छन्। फेसियल, स्क्रब र विभिन्न खाले अनेक उपाय अपनाउँछन्। आफ्नो स्वास्थ्यको लागी महिलाहरु जिम जाने, योगा गर्ने र स्�
मोबाइलको गलत प्रयोगले महिलामा यौनइच्छामा हुन्छ कमी
एजेन्सी / यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा धेरैले ध्यान दिदैनन् तर हामीले दैनिक गर्ने धेरै क्रियाकलापले हाम्रो यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर गरिरहेको हुन्छ। मोबाइलको गलत प्रयोगले यौन तथा प्रजनन् क्षमता घट्ने गरेको बि�
यी घरेलु खानेकुरा खाँदा बढ्छ तपाईंको यौनशक्ति
एजेन्सी/ विवाहित जीवनमा यौनले ठूलो अर्थ राख्छ। आफ्नो जीवनसाथीलाई सन्तुष्टि दिनुपर्ने दुवैजनालाई चुनौती हुन्छ। यौनमा सन्तुष्टि भएन भने सम्बन्धमा दरार आउन सुरु हुन्छ। त्यसैले विवाहित जोडीले अनेक तरहका व्यवहार अप्नाउन थाल्छ�
यसरी लिनुहोस यौनमा दोब्बर आनन्द
एजेन्सी/&nbsp; प्रस्तुत कुरा तपाँईलाई अनौठो र भड्किलो लाग्न सक्छ, किनभने हामी यौनको कुरा गर्ना साथ हामी लाजले खुम्चन्छौं। हामीलाई लाग्छ, यौन भनेको छाडा कुरा हो। यही भ्रमित मानसिकताले हामी यौनको बारेमा खुला चर्चा गर्दैनौ, यौनको उन्
एजेन्सी / मदिरा पिउनु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। मदिरा सेवनले विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्या पैदा गर्ने र मानिसको अकालमा ज्यान लिने गर्छ। त्यसैले बच्चा बेलादेखि नै दूध पिउने बानी बसालिन्छ। मदिरा सेवन गर्नुहुँदैन भनेर स�
तातोपानीले नुहाउँदा पर्ने गम्भीर असरहरुः चाउरी र बाँझोपना
एजेन्सी / हिउँद सुरु भएसँगै जाडो बढ्ने क्रम पनि बढिरहेको छ। जाडो बढेपछि तातोपानीको प्रयोग पनि बढ्दै जान्छ। विशेषगरी जाडोयाममा तातो पानीमा नुहाउने चलन छ। जाडो मौसममा तातोपानीमा नुहाउँदा आनन्द महसुस त हुन्छ। तर के जाडो मौस�
कस्ता महिला यौनमा बढी आकर्षित हुन्छन् ?
एजेन्सी / महिलाको व्यक्तित्वका विषयमा अनेकखालका गलत प्रचार र भ्रम हाम्रो समाजमा ब्याप्त छन् तर आकृति विज्ञानले भने शरीरको अंग र चालढालबाट व्यक्तिको परिचय लिन सहयोग मिल्छ। आँखा, नाकलगायतका अंगले महिलाको यौन प्रतिको स्वभाव र र�
चिसोले हात–खुट्टा र ओठ फुट्यो ? यसरी सहजै बच्नुहोस्
काठमाण्डौ / जाडो महिना शुरु भएसँगै शरीरको छाला फुस्रो हुने, ओठ र हात&ndash;खुट्टा फुट्ने समस्या आम मानिसमा हुन्छ। यसले मानिसको सौन्दर्यलाई समेत बिगार्छ। तर, यो समस्याप्रति थोरै मात्र सचेत हुने हो भने हात, खुट्टा र ओठ फुट्ने समस्याबा
महिनावारीका बेला नगर्नुस् यी पाँच काम
इटहरी / महिलाका लागि महिनावारी निकै पीडादायी समय हो। अपवाद बाहेक लगभग सबै महिला महिनावारीको पीडाबाट पीडित हुन्छन्। यो बेला महिलाको शरीरमा अनेक प्रकारका हार्मोनल परिवर्तन हुने गर्छ। यसकारण महिनावारीका बेला खानपानसहित धेरै क�
बच्चा पाएको कति दिनपछि यौनसम्पर्क राख्नु उचित ?
एजेन्सी / महिलाका लागि बच्चा जन्माउनु पीडा र खुसी दुवै हुन्छ। धेरै महिलाले प्रसव पीडा पचाएर आफुलाई आमा बनाउँदा खुसी व्यक्त गर्छन्। विभिन्न प्रकारका अध्ययनअनुसार धेरै महिलाहरु आमा बनेको एक महिनाभित्रै कामेच्छाका लागि तयार हु�
एजेन्सी / दाँत तीन तहले बनेको हुन्छ। पहिलो तह दाँतको बाहिरी भाग जो हेर्दा सेतो देखिन्छ, मेडिकल भाषामा यसलाई इनामेल भन्छौं। दोस्रो तह इनामेलभन्दा भित्रको तह, जसलाई हामी &lsquo;डेन्टिन&rsquo; भन्छौं। इनामेलको तुलनामा यो अलि कमजोर हुन्छ। �
एजेन्सी / &lsquo;ओए कस्तो दुब्लाएकी ?, खाना नै खादैनौं कि के हो ? डाइटिङमा हो कि के हो ?&rsquo; माथिका प्रश्नले वास्तविक दुब्लो महशुस गर्ने व्यक्तिलाई निकै पीडा दिन्छ। मोटाउन चाहेर पनि कतिको शरीरको तौल बढ्दैन। जसले गर्दा यस्ता प्रश्नहरुले
एजेन्सी / प्रायः मानिसहरुको स्वभाव नै हुन्छ, को मानिसहरु के मा चढ्छन् ? कस्ले के खान्छ ? कस्तो घरमा बस्छन् र यहाँसम्मकी कस्को मासिक तलब कति छ ? प्रायः हामीहरुलाई यिनै कुराहरुको खुल्दुली भइरहन्छ ।अझ कलाकार, नेता र समाजमा मान्य व्यक�
यौनशक्ति बढाउन महिला र पुरुष दुवैले के-के खाने ?
एजेन्सी/ यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका विषयमा नेपालमा अझै खुलेर छलफल हुने अवस्था छैन। हाम्रा खानेकुरा यौन अनुकूल वा प्रतिकूल भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन। स्वास्थ्यमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वास्थ्यमा पर्ने
एजेन्सी / तपाईँ दैनिक रुपमा गर्भनिरोधक चक्की खाएर दिक्क हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्। वैज्ञानिकहरूले एक महिनामा एक पटक एक चक्की खाँदा महिनाभरी ढुक्क हुन सक्ने औषधि पत्ता लगाएका छन्। यो औषधि हाल सुँगुरमा परीक्षण गरे पनि म
यस्तो छ आङ खस्ने समस्या र उपचार
पाठेघर वा आङ खस्ने समस्या महिलामा देखिने जटिल समस्या हो। कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने, असुरक्षित गर्भपतन गराउने, गर्भवती अवस्थामा भारी काम गर्ने र सुत्केरी अवस्थामा उचित स्याहार&ndash;सुसार पाउन नसकेका महिलामा यो समस्या बढी देखिन्छ।
एजेन्सी / स्त्री कण्डमलाई यौनसम्पर्क गर्नुभन्दा केहि समय अगाडि लगाउनु पर्दछ। तर तल्काल प्रयोग गरेर यौनसम्पर्क गर्न मिल्दैन। &nbsp; कण्डममा भएका दुई वटा रिङ्गहरुमध्ये खुम्चिने पट्टिको &nbsp;रिङ्गलाई योनी भित्र राख्नु पर्दछ। मिति र �
एजेन्सी / धुम्रपान हरेक मानिसको स्वास्थ्यको लागि खतरायुक्त हुन्छ। तर, एउटा अध्ययनले महिलाको स्वास्थ्यमा धुम्रपानले धेरै असर गर्ने देखाएको छ। बढ्दो शहरीकरणसँगै चुरोट पिउने महिलाको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दो छ। भविष्यमा महिल
कन्डम धेरै प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यको लागी हानिकारक
एजेन्सी / सुरक्षित यौन सम्पर्कको लागी कन्डमको प्रयोग बढी हुन्छ। कन्डमले अनावश्यक गर्भ रहन नदिने भएकाले पनि जोडीहरु कन्डम प्रयोग गर्न रुचाउने गर्छन्। तर धेरै कन्डम प्रयोग गर्नु पनि स्वास्थ्यको लागी निकै हानिकारक हुनसक्ने देख�
एजेन्सी / अनावश्यक रूपमा दाह्री वा जुँगा पलाउने समस्याबाट धेरै महिला पीडित भइरहेका हुन्छन्। यसले महिलाको सौन्दर्यमा नै असर पुर्&zwj;याइरहेको हुन्छ। चिकित्सकका अनुसार अधिकांश महिलामा हर्मोनको कारणले शरीरमा रौँ पलाउँछन्। कतिप�